FAALLO: Ra’iisulwasaare Khayre Waa Siyaasi Fashilmay ? W/Q: Danjire Caalim – Idil News
FAALLO: Ra’iisulwasaare Khayre Waa Siyaasi Fashilmay ? W/Q: Danjire Caalim
Posted By: Jibril Qoobey March 12, 2019
Dadka Soomaaliyeed way wada xasuustaan qaladaadka ka dhacay labadii sano ee uu xilka hayay Ra’iisulwasaaraha Xukuumadda Federaalka Xasan Cali khayre Falanqeyn tayduna maaha caadifad ee waa mid aan ku tilmaamaayo siyaasiga khaldama waa in loo sheegaa qaladkiisa iyo waxyaabaha ka qaldamay iyo balankii uu qaadey inuu uu fulin waayey. Waa wax aan suurta-gal ahayn inuu si khaldan iskaga dhaadhiciyo inuu waxqabtey.
Waa Tee ku Xukuumad Wanaagsen?
Xukumadda wanaagsen waa nidaam iyo go’aamo ku saleysan sharciga, xeerarka iyo dhaqanka dawladeed oo Dastuurka lagu dhaqmo iyadoo la tixgalinayo Golayaasha sharcidajinta.
Xukumada Ra’iisulwasaare khayre waxaa astaan unoqdey isbarbaryaac iyo isqabqabsi, kuwaas oo ah astaamaha ugu horeeya ee lagu garto in xukumadaasi Fashilantay iyo in kale.
Waxaa xilka laga qaadey wasiiro badan iyo Taliyayaal ciidanka hogaaminayay, waxaa meel xungaaray wada shaqeynta Xukuumadda Ra’iisul wasaare khayre iyo Madaxda Dowlad Gobaleedyada.
Sidoo kale, Waxaa la dhibaateeyey dhowr siyaasiyiinta madax banaan ah, ururada bulshada iyo Saxaafadda, Waxaas oo khalad ah waxaa masuuliyadeeda iska leh Xukuumadda Ra’iisulwasaare khayre, Waa hadii la doonayo in dawlad wanaagsan ay dadka Soomaaliyeed helaan.
Xukumadaha aduunka ka jira waxaa lagu yaqaan dhaqanka kala dambeyn oo sharci ku dhisan. Maadaama uu Ra’iisul Wasaare khayre yahay shaqsiga ugu sarreeya hay’adda fulinta, labadii sano ee uu hogaaminayey
Xukumadaha Marna ma uusan qiran in xukumadiisu ku Fashilan tahay Hirgalinta Hanaanka Dawladnimo ee xukumadiisu balan qaadey,
Waxay Xukuumadiisa noqotey mid ay ka muuqdaan Isbarbaryaaca iyo isqabqabsiga Wasiirada iyo wasiir dawlayaasha ama wasiir ku xigeenadaba. sidoo kale waxaa sanad ka badan aan Agaasimayaal Guud laheyn in ka badan 13 Wasaaradood oo waxaa howshaas baaxadda leh si KMG ah u wada Wiilal yar yar oo aan qibradaas laheyn.
Waxaa xukuumadda Ra’iisulwasaare khayre fadeexad ugu filan wiil yar oo agaasime waaxeed ah inuu ka awood badan yahay Wasiirka Wasaaradda ku magacaaban, Arrimahaanina waxey salka ku haayaan Ra’iisul wasaare Khayre oo ay ku habsatay karti xumo, go’aan xumo iyo khibrad la’aan
dowladnimo, taas oo abuurtay jahwareerka labada sano horyaal hoggaanka Madaxweyne Farmaajo oo wali Qiran la’ in uu ku Fashilmay soo magacaabidii Ra’iisul wasaare Khayre Arrimahaan isbiirsaday ee fashilka sida Amniga Muqdisho oo aad u xun. Cadaalad daro, Musuq maasuqa. Khilaaf siyaasadeed oo dalka oo dhan ka jira & xiriirkii caalamka oo liita dhanac kasta.
Hadii aan wax laga qaban Fashilka xukumada Ra’iisulwasaare khayre arinkan waxay uu horseedi in dalka uu galo colaad iyo isqabsi keeni kara in Doorashooyin aaney dhicin 2021, iyadoo durbaba ay gudiga doorashadu cadeeyeen in 2021 ka aaney suurtagal aheyn iney qabsoonto doorashadii la filayay ee qof iyo cod.
Ugu dambeyn waxaa Madaxweyne Farmaajo laga sugayaa Go,aan Geesinimo leh oo uu khaladka hoggaankiisa ku jira in uu dhaqso u qaato si uu isku saxo.